Sawirro toos ah oo toos ah oo OnePlus 7T Pro ah ayaa la helay | Androidsis
Sawirro toos ah oo toos ah ee OnePlus 7T Pro ayaa la helay
Muuqday sawirada calanka OnePlus ee soo socda, kaas oo imaan doona si loo sameeyo seddex geesood oo leh labada horeyba loo yaqaan, kuwaas oo ah OnePlus 7 y 7 Pro. Kuwani waxaa la bilaabay bartamihii bishii May, taariikh qiyaastii ah saddex bilood laga bilaabo maanta, waxayna dhowaan heli doonaan walaalkood oo ka weyn, kaas oo la imaan doona qaabab ka wanaagsan iyo qeexitaanno farsamo.
Gaar ahaan, waxaan tixraaceynaa fursadan cusub OnePlus 7T Pro. Aaladda ayaa rasmi noqon doonta sannadkan, haddii shirkaddu raacdo isla isbeddelkii ay ku samaysay noocyadeeda "T" ee taxanihii hore. Oktoobar waxay ahaan laheyd bishii aan si rasmi ah u ogaanayno, laakiin, inta aan sugeyno inay soo gaarto, waxaan durbaba heli karnaa fikrad ah waxa ay noo keydsan tahay iyadoo ay ugu mahadcelineyso sawirrada cusub ee xaday ee ayaa u muuqday.
OnePlus 7T Pro ee munaasabaddan ayaa lagu muujiyay iyada oo sawirradeeda lagu ilaalinayo kiis difaac ah. Sababta loo xirayo waxay noqon kartaa qarinta bilicdeeda. Si kastaba ha noqotee, sawirka seddexaad ee aan hoos ku dhejineyno waxaan ku qiimeyn karnaa wax yar gadaashiisa dambe, oo ka kooban nidaam kamarad gadaal ah, iftiinka LED, sida kan OnePlus 7 Pro.
Ma jirto caddeyn la taaban karo oo xaqiijineysa in taleefanka kor lagu soo qaaday uu dhab ahaantii yahay taleefanka casriga ah ee OnePlus 7T Pro. ku dhowaad isku mid ah nooca cagaaran ee Nebula ee casriga casriga ah ee OnePlus 7 Pro. Farqiga kaliya ee weyn ee udhaxeeya labada taleefan ee casriga ah ayaa ah in loo maleynayo in OnePlus 7T Pro uu leeyahay afhayeen ballaaran.
Xusuusnow in OnePlus 7 Pro uu la socdo shaashad 6.67 inch AMOLED ah oo leh QuadHD + xallinta 3.120 x 1.440 pixels (516 dpi), saamiga 19.5: 9, Corning Gorilla Glass iyo heerka cusbooneysiinta 90 Hz, iyo sidoo kale Snapdragon 855, 6/8/12 GB, 128/256 GB oo ah meel lagu keydiyo gudaha iyo batari awood leh oo dhan 4,000 mAh oo leh kaalmo deg deg ah. Halkaas, waxaan ka filan karnaa xoogaa horumar ah OnePlus 7T Pro, iyo waliba qaybteeda sawirada iyo inta kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Sawirro toos ah oo toos ah ee OnePlus 7T Pro ayaa la helay
Twitter-ka loogu talagalay Android wuxuu kuu oggolaanayaa inaad aamusiso ogeysiisyada
Lenovo Z6 Pro wuxuu ugu dambeyntii soo degaa Yurub, iyo qiime aad u tartan badan